30 Responses to “အောင်ပွဲနဲ့အတူ”
ဟုတ်ကဲ့... ပွဲပြီးသွားပါပြီး)).. မချောလည်းပျော်တယ်ဟုတ်...း))))
ရတဲ့သူတွေက ပျော်ရွှင်ကြသလို ရှုံးတဲ့သူတွေငိုကြွေးကြတာ ဘောလုံးပွဲရယ်မှ မဟုတ်ပါဘူး မမရယ်....
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စပိန်နိုင်လို့ပျော်သလို ဒုတိယနဲ့ကျေနပ်ရတဲ့အသင်းအတွက်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ခံစားမိပါတယ်...
မ..တို့ နှစ်သက်တဲ့ စပိန်အသင်းနိုင်လို့ ၀မ်းမြောက်ရပေမယ့် ဟော်လန်ရဲ့ အရှုံးကို ခံစားမိလို့ စိတ်မကောင်းရပြန်ပါတယ်..။ အိပ်ရေးပျက်ခံရေးထားတဲ့ စပိန်အသင်းအပေါ်ထားတဲ့ ချောရဲ့ သံယောဇဉ်ကို ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရင်း သိလိုက်ရပါတယ်။ ကဲ.. နောက်ထပ်၎နှစ်ထပ်စောင့်ကြသေးတာ ပေါ့နော်။ လောလောဆည်တော့ မရွှေချော တစ်မှေးဖြစ်ဖြစ် ခဏလေးတော့ အိပ်လိုက်ဦး..။
ကဲကဲ...မအိပ်နဲ့အုံး......Waka Waka နဲ့ကပြအုံးလေ...။
ဟုတ်တယ်ချောရေ အနိူင်နဲ့ အရှုံးဟာ အလွှာပါးပါးလေးသာ ခြားထားပေမဲ့ ခံစားရတာတော့ အတော်လေး ကွာခြားတယ်...။ ဟော်လန်အသင်းက လူချတာများတယ်ကွယ်...ဒါကြောင့် စပိန်ကို ပိုနိူင်စေချင်တာလေ...အရမ်းပျော်တယ်...ချောနဲ့ အတူ ခံစားရတယ်....:))
စပ်ိန်အသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်ဗျာ.. အ၀ါကဒ် အများဆုံး စံချိန်တင်သွားတဲ့ ပွဲဖြစ်သွားတယ်နော်.. ကျေးဇူးပဲနော်... ဘောလုံးပွဲတော့ ကြည့်လို်က်ရတယ်. ဆုရတဲ့သူတွေ အားလုံးရဲ့ စာရင်းကိုတော့ အခုမှ သေချာ သိလိုက်ရတဲ့ အတွက်ပါ....
အယ်..စလောင်းရှေ့မှာ တစ်ချိန်လုံး ထိုင်ငေးနေတာတောင်
ဆုရစာရင်းတွေ ဘာတွေ မသိလိုက်ရဘူး.(အဆုံးထ်ိ ကြည့်တာပဲ)
ခုမှပဲ သိလိုက်ရတာ ကျေးဇူးနော်...စပိန်အတွက် ဂုဏ်ယူပါတယ်
ဟွန့် .... စပိန်ကို မနိုင်စေချင်ဖူး ဂိုးသွင်းနည်းလို့
ဟော်လန်က ပွဲတိုင်းမှာ ဂိုးမြူးပြီးတက်လာတော့
ဟော်လန်လို အသင်းကို ချန်ပီယံဖြစ်စေချင်တာ
တဂိုး တဂိုးနဲ့ခွနိုင်လာတဲ့ စပိန်ကစားကွက် ကောင်းပေမယ့် သိပ်မကြိုက်တာဘာကြောင့်ပါလိမ့်း(း(
စပိန်ရသင့်ပါတယ်၊ အားကစားစိတ်ဓါတ်ဆိုတာကို ပြသွားနိုင်ပါတယ်၊
အမ လဲ အားကစားဝါသနာပါတာလား...ဟီးဟီး..
မနေ့ ညတစ်ညလုံးအိပ်လို့ မရဘူး ဘောလုံးပွဲ နှိပ်စက်လို့ လေ..........
စပိန်နိုင်တယ်.. ဘာကျွေးမှာလဲ..ကျောက်ခဲစွတ်ပြုတ်တော့ အီနေပြီ....
ဟော်လန်ကို အားပေးနေပေမဲ့ စပိန်ရဲ့ သန့်ရှင်းစွာကစားမှုနှင့် ဟော်လန်ရဲ့ ကြမ်းတမ်းစွာ ကစားမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပြီး စပိန်နိုင်သွားတော့လဲ နိုင်သင့်တဲ့ အသင်းနိုင်သွားတာပါဘဲလေ ဆိုပြီး ကြည်နူးမိတာပါဘဲ။
မချော... ပို့စ်ဖတ်ရတာ အားကစားဂျာနယ်ဖတ်ရတာထက်တောင် ကောင်းနေသေးတယ်။ အကြောင်းအရာတွေလဲ စုံမှစုံပါဘဲ။ ဒီပို့စ်ကို အားကစားဂျာနယ်တစ်စောင်စောင်ဆီ ပို့စ်လိုက်ရင် စာမူခ မနည်းလောက်ဘူးနော် အမ။
မမချော...တော်တော်ပျော်သွားတယ်ထင်ပ :) ရေဘဝဲကတော့ အစောင့်တွေနဲ့ ထားရတော့မယ်ထင်ပ ဗေဒင်မှန်လို့လေ :)
မျှဝေပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်နော် စပိန် နိုင်တာကို ဝမ်းသာတယ်
အော..... မချော တစိုက်မတ်မတ် အားပေး ခဲ့ တာ မှန်သွား တာပေါ့ နော..။
တော်တော့်ကို နှံ့ နှံ့စပ်စပ် လေ့ လာ ၊ အားပေးခဲ့ တာပဲ ။
ကျွန်တော် တို့ဗမာ အသင်းလဲ တစ်နေ့တော့ဖလား ကို ကိုင်မြှောက် နိူင်မှာပါ။
( ရေချိုးဖလား .. လေ )
ဂျပိန်ကွ၊ဂျပိန်... (ဟီး နောက်တာ) စပိန်ကွ..စပိန်...
ကျွန်တော် အားပေးတဲ့ အသင်းက အင်္ဂလန် ခင်ဗျ။သို့သော်လည်း သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း..စောစောစီးစီး
ပြည်တော်ပြန်သွားကြလေတော့၊ကျွန်တော်လည်း ဗိုလ်လုပွဲမှာ စပိန် ကနေအားပေးလိုက်တယ်..။
အောင်ပွဲနဲ့အတူ ရေးထားတာကောင်းလိုက်တာ၊ အချက်အလက်တွေစုံနေတာပဲ၊
ပွဲစဉ်တွေ စတည်းက စပိန်အင်းကိုအားပေးလာတာပါ
ဇာဗီ နဲ့ အင်နီယက်စတာရဲ့ အောင်ပွဲပါ
စပိန်ကစားတဲ့ ပွဲတိုင်းသူတို့နှစ်ယောက် ပဲ ခြေပေါ်တာ..
အသေအခြာပြောရဲတယ်ဗျာ..ဇာဗီသာ မကစားနိုင်ရင် စပိန် ဖြေစစ်ပွဲတောင်မအောင်ဘူး..လာမယ့် ၂၀၁၄ ကျရင် စပိန်ဖလားမရစေရဘူးဗျာ...
တယ်ပြီး အိပ်ပျက်တဲ့ နှိပ်စက်တဲ့ ကမ်ဘာ့ဖလား ခုတော့လည်း ပြီးသွားပြီပေါ့လေ။ နိုင်တဲ့သူတွေပျော်ကြသလို ရှုံးတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကိုလည်း ကြည့်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ငါ့အစ်မအားပေးတဲ့အသင်းနိုင်လို့ ပျော်ပါတယ်။
(ကတိနော် ကတိ၊ ကတိဖျက်လို့ကတော့ သိမယ်)
မွန်တော့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင် ရှုံးသွားတဲ့လူတွေကို မြင်ရင် ဝမ်းနည်းတယ်..
အားလုံး သရည်ဆိုရင် ကောင်းမှာပဲနော် ..
ဆောင်းပါးလေးက ဘောလုံးတလုံးကို ကွင်းအစကနေအဆုံး သယ်ပြီး လှလှပပ ဂိုးသွင်းသွားသလိုပဲ.... ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်ပါဘိ - ။ စပိန်ကို အားမပေးခဲ့ပေမဲ့ သူတို့အတွက် မုဒိတာ ပွားမိပါတယ်...
ချောရေးထားတာ အားကစားဂျာနယ်ဖတ်ရသလိုပဲ ဖတ်ကောင်းလိုက်တာ။ အများကြီးအများကြီး ကျေးဇူးတင်တယ်။
ဘြောပွဲအပြီး နိုင်လို့ ပြုံးနေတဲ့လူတွေကို ကြည့်လိုက်၊ ရှူံးလို့ ငိုသူတွေကို ကြည့်လိုက်နဲ့ ဘောလုံးအပွဲအပြီး ခံစားချက်ကို ပြောမပြတတ်ဖူး..။ ကိုယ်နိုင်ချင်သလို သူများကိုလည်း မရှူံးစေချင်ဘူး...ဆိုတော့လေ..
ဟာ အစ်မရေ ကောင်းလိုက်တာ အစ်မ က List နဲ့ တင်ပြထားတော့ ဘယ်သူဘာ ရတယ်ဆိုတာသေချာသွားတာပေါ့..:) ညီမက စပိန်ဘက် က ဆိုတော့ ပျော်ပြီးသား..ဘောလုံးပွဲတွေလဲ ကြိုက်မှကြိုက် :) thanksalot
(မ) အနမ်း said...
မချောက စပိန်အားပေးတာ အနိုင်ရသွားပြီပေါ့ ။ မုန့်ကျွေးတော့း))
အင်း အနိုင်ရတဲ့သူအတွက် ၀မ်းသာရသလို ရှုံးသွားတဲ့အသင်းတွေအတွက်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါပဲ။
အနိုင်ရတယ်ဆို မုန့်ကျွေးး))
စပိန်အနိုင်ရလို့ဝမ်းသာပါတယ်။ ရှုံးသွားတဲ့ နိုင်ငံတွေအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဘူး။
ခုလို ဆုရတဲ့သူတွေစာရင်း အတိအကျဖော်ပြပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ TV ကသေချာမပြတေ့ာဘူးလေ။
အင်း.... အနိူင်နဲ့အရှုံးနော် ။ အဲ့ဒါလဲ လောကနိယာမတခုထင်တယ်...